Wakiilka De Jong oo ku war galiyay kooxaha PSG, Juventus iyo Bayern Munich xiliga la go’aamin doono mustaqbalka laacibkan – Gool FM
(Yurub) 19 Dis 2018. Wakiilka laacibka kooxda reer Netherland Frenkie de Jong masuulka lagu magacaawo Ali Dursun ayaa shaaca ka qaada xiliga la go’aamin doono sida uu noqon doono mustaqbalka laacibka uu dalaalka ka yahay.
Frenkie de Jong ayaa si weyn lala xiriirinayaa saxiixiisa kooxaha waaweyn qaarada yurub ee Barcelona, Paris St Germain, Juventus iyo Bayern Munich.
Wakiilka laacibka kooxda reer Netherland Frenkie de Jong ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Sport” ee dalka Spain wuxuu kaga hadlay xiliga go’aanka kama dameysta ah ay heli doonaan kooxaha daneenaya saxiixa laacibkan.
“Sheekooyinka ku saabsan kooxaha ayaa wali ah xili hore, waxaan qabaa in go’aanka kama dambeysta ah la gaari doono isbuucyada soo socda”.
“Ku dhawaaqista go’aanka waxay ku xirnaan doonaa qaab ciyaareedka Frenkie de Jong inta lagu jiro qeybta labaad ee xili ciyaareedka, laakiin ciyaaryahanka wuxuu haatan diirada saari doonaa kooxdiisa Ajax iyo xulkiisa Holand”.
Si kastaba Ali Dursun oo ah wakiilka Frenkie de Jong ayaa wuxuu sheegay in qiimaha bilawga ah ee laga soo gudbin karo ciyaaryahankan uu gaarayo 75 milyan euro.
Real Madrid oo iska xaadirisay finalka Club World Cup, kadib markii ay guul muhiim ah ka gaartay kooxda Kashima Antlers + SAWIRO